Cruz Oo Ku Guuleystay Loolankii Gobolka Iowa - iftineducation.com
iftineducation.com – DES MOINES—
Senator Ted Cruz ayaa codeyntii gobolka Iowa kaga adkaaday bilyaneerka Donald Trump, halka Clinton ay codad aad u yar ka horreyso Sanders, dhinaca xisbiga dimoqraadiga.
Cruz, oo ah sharci dejiye muxaafad ah oo laga soo doorto gobolka Texas ayaa helay 28% codadka, Taasi oo 3.5% ka badan codadka uu helay Donald Trump, oo weli ah ninka ku horeeya codadka ra’yiga ee dalka oo idil.
Senator-ka gobolka Florida, Marco Rubio ayaa kaalinta saddexaad ku galay 23% codadka.
Dhinaca xisbiga dimoqraadiga, Clinton ayaa heshay 49.9% codadka, halka Bernie Sanders uu ka helay 49.5%. Inkasta oo Clinton ay wax aad u yar ka horeyso Sanders, haddana weli si rasmi ah looguma dhowaaqin guusheeda.
Clinton ayaa ku dhowaaqday inay ku guuleysatay gobolka Iowa.
Natiijooyinka codbixinta Iowa ayaa muuqaal guud ka bixinaya fikradaha iyo wax ay doonayaan codbixiyayaasha, kadib sanad ololeyn ahaa.
Gobolka xiga, ee codbixinta ay ka dhici doonto waa gobolka New Hampshire oo 9-ka February qabanaya tartanka musharaxiinta labada xisbia, waxaana illaa iyo hadda ku horeeya Donald Trump oo dhinaca Jamhuuriga ah iyo Bernie Sanders oo dimoqraadiga ah.